Italiana ankizivavy dia mora loatra. Ny Florentine
Tsy misy, diso ianao, ny namana vao haingana no nilaza tamiko. Italiana ankizivavy dia mora loatra. Aho fitenenany tamin’ny resy lahatra fijery. Izany no vaovao tamiko. Ary aho fa nihaona un Sacco di genet izay ho reny koa. Koa nahoana no dia foana aho nandre mikasika ny tovovavy eto ho toy izany sarotra. Izaho sahy, miezaka ny mahazo ka hatrany ambany ny tsy fitoviana eo amin’ny heviny. Ry zareo sarotra, eny, sarotra ny hihaona, sarotra ny hahalala.
Izay efa reko. Raha ireo mpianatra vehivavy izay mianatra any ivelany eto zara raha mitaraina mikasika ny tsy fahampian’ny italiana olona, ny lehilahy mitovy hitomany ny toa tsy fisian’ny italiana vehivavy ny mihaza.
Aiza izy ireo niafina
ny namana avy any an-trano, mianatra eto mandritra ny volana vitsivitsy, dia nanipy ny tanana, ny fahatelo in jest, ny roa ampahatelon’ny ao amin’ny fahadisoam-panantenana, rehefa nihaona taminy noho ny zava-pisotro. Tsara, ho iray, izy tokoa fa t handeha hahita azy ireo amin’ny mpianatra ny Zavatra pubs izy frequented noho ny euro siny. Fa na dia izy no faritra ao amin’ny ny toerana tsara, ny italiana nightspots, izy ihany no ho afaka mankafy ireo vehivavy tsara tarehy avy lavitra. Ary tsy hoe satria izy Amerikana, fa noho italiana ny vehivavy amin’ny ankapobeny aza t any am-ponja mba hihaona ry zalahy. Ry zareo fotsiny avy noho ny zava-pisotro sy ny namana tsara, matetika ao amin’ny mifangaro zazalahy-vondrona tovovavy fa efa mafy ny taona, fantatra amin’ny anarana ho toy ny iombonana, ary noho izany izy ireo dia azo atao ny manatona. Tsy izy ireo fa t hiresaka ny mpiara-miasa aminy na olona iray te izy ireo nampidirina any amin’ny antoko ny herinandro lasa teo, tokony ho mihazakazaka ho azy ireo, saingy ny fihaonana ho an’ny olon-tsy fantatra mety ho hook-dehibe, ny daty sy ny fifandraisana dia tsy ny fandaharam-potoana. Ao Italia, misy fomba ny manao zavatra indrindra, tonga dia tapaka ary tonga tsy dia fa, sy ny fivoriana ny ankizilahy ao amin’ny trano fisotroana mianjera kendreo ho amin’ny sokajy farany. Ao amin’ny States, ny tokan-tena zazavavy akanjo, mandeha avy amin’ny iray na roa vehivavy sakaizany amin’ny toy izany koa ny asa fitoriana, ary mitazana ny fisotroana club fandraisam-bahiny ny olona iray, dia mahita tsara tarehy, ary avy eo ny vola mba mitsiky sy manao hamitaka-maso fifandraisana amin’ny hoe lehilahy izy mandra-moseys amin’ny mahery ary nividy azy ny misotro. Ny azo atao dia avy eo tsy misy farany, na dia tsy voafetra na ny karazana ry zalahy ao amin’ny trano fisotroana sy ny sehatra ny fikasany. Eto, etsy ankilany, mba hihaona tsirairay, italiana tovovavy sy ny italiana lehilahy tokony ho araka ny tokony ho nampahafantarina tamin’ny alalan’ny namana niraisana iray na olom-pantatra, dia tokony ho fanolorana, aseho ho iray hafa. Raha ny fahitàna azy, na dia mety ho vady mila ho soso-kevitra. Indray mandeha araka ny tokony ho fampidiran-dresaka efa vita, azoko an-tsaina ny mety dia tsy misy farany ho azy ireo ihany koa. Izany fahasamihafana eo amin’ny fomba amam-panao dia mety toa tsy manan-danja, fa raha izahay vahiny mitaraina mikasika ny fomba sarotra izany ny hihaona olona eo amin’ny firenena tsirairay avy, Italiana manana izany fa sarotra be. Tsy maintsy miandry ho nampidirina. Tsy maintsy miandry ho nihaona. Tany amin’ny oniversite izao andro izao, ny ankizivavy mametraka avy amin’ny frat antoko hanimba izany ho antsika ny sisa, satria ry zalahy, tsy voatery haka zazavavy avy amin’ny daty intsony to get laid, fotsiny aza t hanelingelina ny ezaka ny mampiaraka rehefa any am-pianarana. (Te ho tafintohina ny maro coeds izay mbola tsy eo ny mahazatra sakafo hariva sy ny sarimihetsika daty.) Toy izany koa, isika vahiny ankizivavy hanimba izany fa italiana ny vehivavy, ary tahaka ny Jiosy namany Audrey mahazo tezitra isaky ny fotoana, dia mihaona ny tsara Jiosy zazalahy izay nahazo ny Aziatika sipa, azoko an-tsaina italiana ny vehivavy no tsy faly loatra. Ny voalohany Italiana mpampianatra eto, mazava ho azy fa tany matetika ny fifandraisana amin’ny vahiny, nahatakatra ny olana, ary, raha tao amin’ny toe-draharaha tsy mahazatra ny manana olon-tiany koa ny bevy ny lehilahy namako, efa nandray teo amin ny tenany ny zava-dehibe andraikitra introducer, ny matchmaker. Kely dia tonga saina izy fa ny anaram-bositra, Malahelo ny Lalao, dia tsy fambara tsara ho an’ny mifanaraka izy, dia manao. Rehefa tapitra ny andro aza, izany rehetra tsara sy ny tsara mba hiresaka momba ny fivoriana ny olona tsy ho any am-ponja, fa ireo nightspots lasa miaraka voatondro toy ny ankehitriny ny toerana fivoriana tsy misy antony: ny olona no manana olana fivoriana tsirairay any an-kafa. Ho an’ny ankamaroan’ny hafa, lasa ny andro dihy efitrano kely, mafy-raiki-pitia amin’ny fiaraha-monina, izay manambady ny sekoly ambony malalany, na ny zazalahy varavarana manaraka. Ary raha italiana ry zalahy mihevitra fa sucks fa italiana ny ankizivavy no tena mafy ny mba hihaona, tsy marina peachy ny ankizivavy na. Eny tokoa, izy, tahaka ny voatery ny miandry nampiditra fomba amam-panao, mazàna begrudge ny zava-misy fa ny vahiny ankizivavy izay hanafika ny tanàna aza t maintsy play ny lalao amin’ny alalan’ny mitovy ihany ny fitsipika. Avy eo indray, fara fahakeliny, ry zareo tsy fantatra ho mora, na dia izany aza, araka ny namako, izy, indray mandeha ianao ve dia nihoatra ny olana tafiditra ao amin’ny fivoriana izy ireo. related lahatsoratra VAOVAO ny Governemanta italiana fisaorana Brexit fiomanana drafitra hetsika-ny fanekem-Ny alakamisy vinavina: tsara ny zava-mitranga ao Florence VAOVAO Medici gem famoriam-bola ao amin’ny vakoka arkeolojika Museum FIAINANA ny Taom-Baovao ao Florence hizara Tova Pipavav Paha, ny taona New Yorker ary nahazo diplaoma avy any Washington Oniversite tany St. St. Louis, Efa miaina sy miasa ao Florence, manadihady ny ao an-tanàna ins sy avoaka, nandritra ny volana maro
Italia Chat, Italia Chatroom, Italia Any Amin'ny Karajia, Italy Amin'ny Chat Toerana →